By T-WORK SYSTEM | September 21, 2019 | 0
အခုလို IT ခေတ်ကြီးမှာ စာအုပ်တွေ ထက် ဖုန်းတွေက အသုံးများလာပီနော် 📘 📲 Catalog Book တွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း စာအုပ်ရဲ့အရွယ်အစားကြီးလာတာနဲု့အမျှ သယ်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိတ်ကူးမိကြဖူးမှာပေါ့။ စာအုပ်ကြီးကို ဖုန်းထဲထည့်ယူသွားလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့။ ကဲ စိတ်ကူးလေးတွေ အမှန်အကန်ဖြစ်လာပါပြီနော်။ 💯💯 Catalog App သုံးခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲဆိုရင်…. ✏ပစ္စည်း အသစ်ထွက်တိုင်း ဈေးနှုန်းတွေ အပြောင်းအလဲရှိတိုင်း Catalog စာအုပ် အသစ်တွေ ထုတ်ရခြင်းမှ ကင်းဝေစေနိုင်ခြင်း ✏မိမိထုတ်လုပ်ထားသော Catalog App မှ ပစ္စည်းများ၏ ပုံများ ဈေးနှုန်းများ အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း ✏Website နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး Website က Data တွေ ကို…
Social Media ပေါ်ကနေပြီ Digital Marketing, Online Marketing , Digital Branding, E-Mail Marketing တွေပြုလုပ်လို့ရနေပြီ။ Website ဘာလို့လိုအပ်နေသေးတာလဲ ??? မည့်သည့် Social Media Platform ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင် Platform တစ်ခုကတော့အပ်ပါသည်။ ခိုင်မာသေချာသည့် လုပ်ငန်းအတွက် Website တစ်ခုသေချာပေါက် လိုအပ်မှာပါ။ Website ကိုမိမိတို့ အသုံးပြုနေသည့် Social Media အားလုံး၏ အဓိကပင်မနေရာတစ်ခုအဖြစ်ထားရှိမည်ဆိုပါက …… Social Media တွင် လတ်တလော ကြော်ငြာပေးထားသည့် Post သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုသာ Customer များအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပြီး မိမိလုပ်ငန်း Service Product များ အားလုံးအကြောင်းသိရှိလိုပါက History ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။…
By T-WORK SYSTEM | August 7, 2018 | 0
Business အတွက် Websiteရှိနေပြီလား ??? ဥပမာ 》》 https://www.example.com လူအများစုဟာ Internet ကိုFacebook တခုတည်းကိုသာမဟုတ်တော့ပဲ ပိုမိုရင်းနှီးစွာ အသုံးပြုလာကြပါပြီ။ Internetကိုအသုံးပြုပြီး onlineပေါ်ကနေ ဈေးကွက်အပြိုင်ရှာဖွေနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ Facebook Business Page ရဲ့ Profile ထဲကWebsite Address ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေလို့မရတော့ပါဘူး။ Email AddressနေရာမှာGmail အစား ကိုယ်ပိုင် Business Mail နဲ့အစားထိုးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ Facebook ကနေ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကို ကြေငြာနေရုံနဲ့တင် အဆင်ပြေပြီ ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျောက်ပစ်ရမဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ တချို့လုပ်ငန်းတွေ Website မသုံးဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ Website သည်လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် ပိုပိုပြီးအရေးပါလာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM မှ ၁သိန်း ၁သောင်းကျပ်သာကျသင့်မည့် Hosting + Domain Service…
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် #Website 🌐🌐🌐 တစ်ခု လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းသုံး #E-Mail 📩📩📩 လည်းသုံးချင်တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးလည်း မသုံးချင်သေးဘူး။💸💸💸 ဒါပေမဲ့ ဈေးပေါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အရာတွေကဲ့သို့ မိမိ Website မှာလည်း ခဏခဏ Errorဖြစ်လိုက်, မကြာမကြာ Site Down သွားလိုက် ဖြစ်နေတဲ့ Website ကိုတော့မလိုချင်ဘူး။ 📉📉📉 Secure ဖြစ်တဲ့ Website လေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်။ E-mail ကအစလုံခြုံ ရေးကောင်းတဲ့ Service လေး လိုချင်တယ် ဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 😵😵😵 ဟုတ်ကဲ့ T-WORK SYSTEM မှာအဖြေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Company မှ အနည်းဆုံး 90,000 Ks(Per Year) တန်…
Domain နဲ့ Hosting များကို Visa Master Card မလိုပဲ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည့် Website တစ်ခုရှာဖွေနေပါသလား?
By T-WORK SYSTEM | July 21, 2018 | 0
By T-WORK SYSTEM | June 19, 2018 | 0
Domain နဲ့ Hosting များကို Visa Master Card မလိုပဲ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည့် Website တစ်ခုရှာဖွေနေပါသလား။ Hosting နှင့် Domain Name လိုအပ်နေသူများအတွက် T-WORK SYSTEM Website တွင် Domain နှင့်Hosting ၀ယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့် ကို 4.24 မိနစ်စာ Video File ဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလို၍ဖြစ်စေ ဝေဖန်အကြံပြုလို၍ဖြစ်စေ comment နှင့် E-mail များမှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ T-WORK SYSTEM Website တွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM ရဲ့ Service များအကြောင်း လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 📞📞📞ဆက်သွယ်ရန်📞📞📞 📞 Phone – 09965088114,…